Celeb sons and daughters
Topic: Celeb sons and daughters
Author Topic: Celeb sons and daughters (Read 101486 times)
Re: Celeb sons and daughters
« Reply #30 on: November 12, 2015, 12:47:31 AM »
नेपाली सेलिब्रेटीका चर्चित छोराछोरी
कलाकारीतामा जिवन सर्मपण गरेका कतिपय कलाकारका सन्तान कला क्षेत्रमै रमाईरहेका छन् । कतिपय आफ्ना अभिभावकका अधुरा चाहना पुरा गर्नमा कला क्षेत्रमा देखिन्छन् । कला क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँगै हिमचिम बढी हुने भएकाले पनि कलाकारका सन्तानलाई कलाकारीताको बाटो असहज हुँदैन । त्यसैले पनि कलाकारका छोराछोरीहरु कलाकारीतामा देखिएका हुन् ।
सानैदेखि बाल कलाकारको रुपमा अभिनय सुरु गरेका सलोन चलचित्रको नायक भइसकेका छन् । उनले होस्टल, आभास, एउटा साथी, सम्बोधनलगायतका चलचित्रमा नायक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । चलचित्र बाबुबाट अभिनय आरम्भ गरेका उनले हामी तिनभाईलगायतका चलचित्रहरुमा गतिलो अभिनय गरेका थिए । सलोन नेपालका चर्चित चलचित्र निर्देशक तथा कलाकार सोभित बस्नेतका छोरा हुन् । आफ्नो बुबा निर्देशक भएकाले पनि सलोनलाई कलाकारीतामा प्रवेश गर्न गाह्रो भएन । अहिले उनको बुबाको चर्चा सेलाउँदै जाँदा उनको चर्चा चुलिँदै गएको छ ।
अनमोल के सी
बालकलाकारको रुपमा खासै नदेखिएका अनमोल केसी अहिले चकलेटी नायकको रुपमा उदाएका छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सुपरस्टार भूवन केसीका छोरा अनमोलले पहिलो चलचित्रबाट नै राम्रो सफलता पाए । भूवन केसीले चलचित्रमा अभिनय गर्ने क्रम पातलिँदै गर्दा अनमोलको माग बढीरहेको छ । उनले अभिनय गरेका होस्टल, जेरीलगायतका फिल्मले गतिलो सफलता पाएका छन् ।
नायिका केकी अधिकारी चलेकी नायिका हुन् । उनको माग अझै बढ्दो छ । चलचित्र निर्देशक बद्री अधिकारीकी छोरी केकीले ठूलो संख्यामा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन् । म्युजिक भिडियोमा पाएको सफलतापश्चात उनी चलचित्रमा देखिएकी हुन् । उनको बुबा बद्री अधिकारीले चक्रव्युह, ज्यान हाजीर छ, आवाज, लडाईँ, इन्द्रावतीलगायतका चलचित्र निर्देशन गरेका छन् । केकी अधिकारीले आई एम सरी, महसुस, मायाको बारीमा, मेरो बेस्ट फ्रेण्ड, बितेका पललगायतका चलचित्रमा अभिनय गरेकी छिन् ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका बाल कलाकार अनुभव रेग्मी अहिले नाई नभन्नु लको चौथो संस्करणका लागि अनुबन्धीत भइसकेका छन् । रिदम, नाई नभन्नु ल चलचित्रमा अभिनय गरेर गतिलो प्रतिक्रिया पाएका उनलाई निर्देशक विकास आर्चायले चलचित्रमा डेब्यु गराएका हुन् । उनले आफ्नो क्युट अनुहार दमदार अभिनयबाट सबैका मन लोभ्याएका छन् । उनका आमा कविता रेग्मी पनि कलाकार हुन् । उनको बुबा पनि चलचित्र क्षेत्रमै रहेका छन् । पारिवारीक चिनजान र उनको अभिनय क्षमताका कारण उनले सानो उमेरमा नै यस्तो चर्चा पाएका हुन् ।
विश्वकै कान्छा चलचित्र निर्देशक बनेका बाल निर्देशक हुन् सौगात बिस्ट । उनले निर्देशन गरेको सिनेमा हो लव यु वावा । जसले सिनेमा बजारमा चर्चा पनि बटुल्यो । यहि चलचित्र निर्देशनका कारण गिनीज बुक अफ वल्र्ड रेर्कडमा उनको नाम लेखिएको छ । सौगातका बुबा गजित बिष्ट पनि नायक तथा कलाकार हुन् । उनी राम्रो नृत्य पनि गर्छन । गजितको छोराछोरी दुबै चलचित्र क्षेत्रमा छन् । उनकी छोरी संगम विष्टले राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार पनि पाईसकेकी छिन् । गजित बिष्टले मायाज बार, तोरीलाहुरे, लभ यु बाबालगायत दर्जनौँ चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् ।
अहिले चर्चामा रहेका अर्का कलाकार हुन् संयम पुरी । बालकलाकारका रुपमा थुप्रै फिल्ममा अभिनय गरेका संयमले चलचित्र सायदबाट नायकको रुपमा देखा परेका हुन् । उनको अर्को चलचित्र पुन्टे परेड र आभाषले पनि राम्रै प्रतिक्रिया पाएको थियो । उनको अर्को चलचित्र लभ सभ भदौ २५ गतेदेखि प्रर्दशनमा आउँदैछ । संयम चलचित्र निर्देशक नारायण पुरीका छोरा हुन् ।
चलचित्र आभास र नाई नभन्नु ल ३ बाट चर्चामा आएकी नायिका हुन् आश्मा डि सी । आश्मा डिसीका बुवा पनि यहि क्षेत्रमा सक्रिय छन् । चलचिल निर्माताका साथमा साथसाथै टि भी फिल्मी मनै देखि फिल्मी भन्दै टि भि फिल्मी चलचएका छन् । उनले टि भि फिल्मीका व्यवस्थापक हुन् ।
टिका पहरीका छोरा गौरब पहरी पनि चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो पाईला चाल्दै छन् । मञ्जरी, होस्टल, अधकट्टीलगायतमा अभिनय गरेर प्रशंसा बटुलेका गौरवका बुबा टिका पहरी रंगकर्मी तथा कलाकार हुन् । उनले देउता, बादल, युगदेखियुगसम्मलगायतका थुप्रै चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् ।
त्यस्तै निर्देशक शिव रेग्मीकी छोरी भावना रेग्मी, राजेन्द्र खड्गीकी छोरी रागिनी खड्गीलगायतले पनि आफ्नो अभिभावकको बिडो थाम्ने प्रयास गरेका छन् ।
« Reply #31 on: May 18, 2016, 12:34:32 PM »
Ashok Sharma's daughter
kriti sharma .jpg (291.82 kB, 1252x1252 - viewed 276 times.)
« Reply #32 on: May 18, 2016, 11:54:40 PM »
« Reply #33 on: May 20, 2016, 07:11:32 PM »
sexi rahe chha ....
« Reply #34 on: November 03, 2017, 01:53:47 AM »
फिल्मी पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्किएकी जाहानवी बस्नेत निर्माता/निर्देशक तथा अभिनेता जयकिशन बस्नेतकी छोरी हुन् । उनले तीनवटा फिल्ममा काम गरिसकेकी छिन् ।
रिलिज हुने तयारीमा रहेको ‘पञ्चायत’बाट जाहानवीले धेरै आशा गरेकी छिन् । आफूलाई आएको फिल्मको स्क्रिप्ट पारिवारिक सेन्सरबाट छानिने हुँदा थोरै फिल्म मात्रै खेलेको उनी बताउँछन् । उनले दर्जनौँ म्युजिक भिडियो खेलिसकेकी छिन् ।
« Reply #35 on: May 31, 2018, 09:37:49 AM »
Anmol KC and Suhani Thapa
« Reply #36 on: July 11, 2019, 09:01:29 AM »
Shivahari Poudel's daughter
shivahari and ekata.jpg (79.91 kB, 960x720 - viewed 84 times.)
« Reply #37 on: August 06, 2019, 09:50:13 PM »
😉 दीलिपकी छोरीले ‘लक्का जवान’ नगर्ने
कुनै समय नेपाली फिल्ममा एकछत्र राज गरेका अभिनेता दीलिप रायमाझीकी छोरी दिव्याले आफ्नो पिताको बिँडो थाम्न लागेको चर्चाले केही दिनयता फिल्मवृत राम्रै तातेको छ । हास्यकलाकार शिवहरी पौडेलले फिचर फिल्म निर्देशनमा हात हाल्न लागेको ‘लक्का जवान’ बाट उनलाई डेब्यू गराउने तयारी चलेको थियो । तर, अध्ययनका कारण दिव्याले तत्काल फिल्म नगर्ने भएकी छन् ।
67607431_346076359669484_2107780339066521817_n.jpg (49.76 kB, 419x419 - viewed 389 times.)
d.jpg (142.89 kB, 768x960 - viewed 90 times.)
Divya Rayamajhi.jpg (175.51 kB, 743x944 - viewed 84 times.)
« Last Edit: August 06, 2019, 10:37:42 PM by samir211 »
« Reply #38 on: November 19, 2019, 09:14:56 AM »
« Reply #39 on: May 15, 2020, 10:56:52 PM »